Raharaha Oniversiten'i Mahajanga: Mihemotra ny CODIS
mardi, 07 novembre 2017 13:22
Foana avokoa aloha ireo fampiantsoana voarain'ireo mpianatra miisa 71 mianadahy hanatrika Conseil de discipline (CODIS) saika hatao ny 08-09-10 novambra ho avy izao. Mihemotra amin'ny fotoana tsy voafetra izany araka ny fanambarana nataon'ny tomponandraikitry ny oniversite omaly alatsinainy 06 novambra 2017.
Noraisina indray izao fanapahan-kevitra izao taorian'ny fifampidinihana manokana nataon’ireo tomponandraikitra isan-tokony voakasik'ity raharahan'ny oniversite ity sy ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Rasoazananera Marie Monique ary ny filohan'ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao.
Manahy ny rehetra fa ho vita vita ho azy ho lasa « dossier classé » ny mahakasika ity raharaha ity amin'izao fanapahan-kevitra goragora sy miovaova izao.
Efa misy ny fifampiraharahana ambadika raha ny loharanom-baovao voaray ary samy efa mitsangana miaro ny mpianatra voakasika ny olom-panjakana avy amin'ny faritra misy azy avy. Samy tsy manaiky ny hanasaziana ny zanany.
Tsy manana azon-damosina ny oniversite sy ny ministera mpiahy azy raha toa ka tsy mitana ny teny nomeny amin'ny hanasaziana ireo rehetra tompon'antoka tamin'ireny raharaha fanimbana sy fandoroana trano sy fifandratrana ary fandrobana fananana teny amin'ny campus Ambondrona ireny.
Nilaza ireo tompon'andraikitra fa hohampahafantarina amin'ny fotoana manaraka ny daty hanaovana ny CODIS.
mardi, 12 décembre 2017 06:45
mardi, 12 décembre 2017 02:05
lundi, 11 décembre 2017 10:15
lundi, 11 décembre 2017 05:38
lundi, 11 décembre 2017 04:07
lundi, 11 décembre 2017 03:19
dimanche, 10 décembre 2017 14:43
dimanche, 10 décembre 2017 01:19